Ninkii Hitler muuqaalkiisa dartiis shaqadiisa ku waayay oo lacag helay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ninkii Hitler muuqaalkiisa dartiis shaqadiisa ku waayay oo lacag helay
Nin shaqaale ka ahaa shirkadda BP ee dalka Australia, oo horay shaqada looga eryay kaddib markii uu shirkadda la barbar dhigay muuqaalka caanka ah ee Hitler, ayaa ku guuleystay lacag dhan $200,000 (£109,000).
Qoraalka sawirka,Bruno Ganz ayaa doorka Adolf Hitler ku jilay filimka Downfall
Scott Tracey ayaa muuqaalka lagu matalay Hitler, oo ku jiray filimkii Downfall ee soo baxay sanadkii 2004-tii, u adeegsaday inuu ku muujiyo qaabka ay shirkaddii uu ka shaqeynayay u sameyso wadaxaajoodyada ku saabsan mushaarka.
Wuxuu muuqaalkaas soo galiyay bog Facebook ah oio markii dambe la xidhay.
Durbadiiba waxaa laga eryay shaqada. Hase yeeshee, labo sano oo uu dagaal dhinaca sharciga ah ku jiray kaddib, wuxuu ku guuleystay kiiskii ku saabsanaa in si aan caddaalad ahayn shaqada looga eryay, dib ayuuna ugu laabtay shaqadiisii.
Kharashka la siiyay ayaa ku filnaanaya khasaare badan oo uu sheegay inuu soo gaadhay intii uu shaqo la’aanta ahaa.
Muuqaalka lagu qabsaday ninka, ee ku jiray filimka Downfall, ayaa lagu matalayay dabeecadihii Adolf Hitler, waxaana ka muuqda isagoo si cadho leh ula hadlaya janaraalladii ka hoos shaqeynayay.
Laakiin Scott Tracey wuxuu ku dul qoray qoraallo muuqaalka hoos soconaya oo shactiro ah.
Mas’uuliyiinta shirkadda BP ayaa sheegay in falka uu sameeyay ninkaas uu ahaa “mid aad u xun” sidaas awgeedna shaqada looga eryay Mr Tracey.
Wuxuu markii hore kiiskiisa hor geeyay guddi xaqiiqo raadin ah, isagoo ku doodaya in caddaalad darro lagu eryay, laakiin wuu ku guul darreystay kiiskaas.
Mr Tracey ayaa markaas kaddib racfaan qaatay, isagoo ku adkeystay inuusan si ulakac ah cidna wax ugu dhimin, muuqaalkaasna uu uga dan lahaa majaajilo kaliya.
Wuxuu intaas ku daray inuusan muuqaalka dhexdiisa ku magacaabin BP iyo cid kale oo gaar ah toona.
Maxkamadda federaalka ayaa xukuntay in muuqaalkaas uusan wadanin wax sabab ah oo maamulka shirkadda BP la xiriirinaya Naaziyiinta, sidaas darteedna Mr Tracey loo oggolaado inuu shaqadiisa ku laabto.
Maalintii Isniinta, waxaa ninkan la guddoonsiiyay $177,325, taasoo u dhiganta mushaarka uu qaadan lahaa intii uu shaqada ka maqnaa, waxaana laga gooyay canshuurta. Waxaa kale oo uu helay $24,070 oo ah lacagta howlgabnimada.
Maamulka BP ayaa ku dooday in Mr Tracey la siiyo lacag dhan $150,000, oo ka yar kharashkii uu heli lahaa haddii aan shaqada laga eryi lahayn.
Shirkadda ayaa dooneysay in lacagta la dhimo marba haddii muuqaalkaas lala wadaagay qaar ka mid ah shaqaalaha, taasina ay tahay xad-dgub, sida uu qoray wargeyska Sydney Morning Herald.
BP waxay sidoo kale sheegtay in loo baahnaa in lacag kale la jaro maadaama Mr Tracey uu shaqo kale heli karay intii ay dacwadda socotay.
Golaha dhowrista caddaaladda shaqooyinka ayaa sheegay inaysan wax caddeyn ah u heynin doodda ku saabsan in Mr Tracey uusan raadsanin shaqo kale.
Brad Gandy, oo ah xog-hayaha ururka shaqaalaha ee Australia, ayaa sheegay in Mr Tracey uu la kulmay “dhibaato aan loo baahneyn”.
Ninkii Hitler muuqaalkiisa dartiis shaqadiisa ku waayay oo lacag helay was last modified: August 11th, 2020 by Admin